Dhagayso: Maxaa laga yiri saamiga ay Itoobiya ku leedahay Shidaalka Soomaali-galbeed. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhagayso: Maxaa laga yiri saamiga ay Itoobiya ku leedahay Shidaalka Soomaali-galbeed.
Last updated Jun 10, 2019 420 0
Dhagaystayaasha idaacadda Al-Furqaan ee jooga dalka iyo dibadiisa ayaa ka hadlay ansixintii uu baarlamaanka Itoobiya ansixiyay saamiga ay ku leeyihiin shidaalka hodanka ku ah dhulka Soomaali-galbeed ee ku jira gumeysiga Xabashida.
Dadkan oo lasoo xiriiray Idaacadda Al-Furqaan ayaa si yaabo kala duwan u eegay warkaas, balse waxay isku waafaqeen hoostana ka xariiqeen in Itoobiya ay tahay dowlad cadow ku ah Soomaaliya, ayna dooneyso iney kheyraadkeena boobto.
Waxay sheegeen inaaney waxba ka jirin saamiga 50% ee uu baarlamaanka Itoobiya sheegay iney ku leeyihiin shidaalka Soomaali-galbeed, taas caksigeedana ay ku han weynyihiin iney xureeyaan guud ahaan dhulka Soomaaliyeed.
Dhagayso Aragtida dadweynaha ee ansixinta Miizaaniyadda Shidaalka ee Soomaali-galbeed.